Projects Directory | iMyanmarHouse.com
22 December 2021 to 21 January 2022 - Brilliance Mansion Condo Online Sales Event
25 December 2021 to 24 January 2022 - Magical World Apartment Online Sales Event
1 January 2022 to 31 January 2022 - Diamond Lotus Condo Online Sales Event
13 January 2022 to 12 February 2022 - Snow Garden Online Sales Event
Brilliance Mansion Gracious Garden Condominium
Brilliance Mansion ကွန်ဒိုသည် မင်းရဲကျော်စွာလမ်း ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် Singapore Yao Hua Group Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏အဓိက CBD ဧရိယာတွင် တည်ရှိနေသောကြောင့် ကောင်းမွန်သောလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အထောက်အပံ့များဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်...
Snow Garden Housing Snow Garden Housing ကို မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလောကတွင် အရည်အသွေးကြောင့် နာမည်ကျော်သည့် Shwe Taung Real Estate မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်သည်။ ၀ယ်ယူသူများ ဂရန်အမည်ပေါက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သွားလာရလွယ်ကူသည့် သုမင်္ဂလာလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ၊ Brainworks Total ၊ ILBC စသည့် International School များ ၊ Junction Zawana ၊ AKK...
- တောင်ကြီးမြို့ Downtown Area မှာရှိတဲ့ Paradise တစ်ခုဖြစ်သည်။- အေးချမ်းပြီး ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသောကြောင့် Privacy ရှိရှိနေနိုင်မည်။- ဝယ်ယူသူ ဂရန်အမည်ပေါက်ရရှိမည်။- စတုရန်းပေ ၂၀၀၀ ပတ်လည်အထိ ကျယ်ဝန်းသည့် ၂ ထပ်ခွဲ လုံးချင်းအိမ်များဖြစ်သည်။- Type A / Type B / Type C အိမ်ပုံစံ (၃)...
Royal Parami Residence
Royal Parami Residence ကို အမှတ် -၂ ၊ ပါရမီလမ်းမပေါ် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တွင် Farmer Phoyarzar Construction Co., Ltd. မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားသည်။ ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားပြီး BCC (လူနေထိုင်ခွင့်) ကျပြီးဖြစ်သည်။ အကျယ်အ၀န်း 1647 sqft မှ 1854 sqft အထိကျယ်ဝန်းသည်။2Bedroom Unit (1Master, 1Single)- Type A - 1854sqft3Bedroom Units (1Master, 2Single)-...
မြောက်ဒဂုံ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ လူနေထိုင်ခွင့် (BCC) ကျပြီးဖြစ်သည်။ ၃၄ ပေ × ၅၅ ပေ ကျယ်ဝန်းသည်။ အိပ်ခန်း (၃) ခန်း ၊ ဧည့်ခန်း ၊ ထမင်းစားခန်း ၊ ရေချိုးခန်း ၊ အိမ်သာ မီးဖိုခန်း စသည်တို့ အခန်းဖွဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကားပါကင် ၊ ဓာတ်လှေကား ၊ မီးစက် ၊...
ီDa Nyin Gone New Wholesale Market
Royal Aung Myanmar
တော်ဝင်အောင်မြန်မာဆောက်လုပ်ရေးမှ မြို့နယ်စုံရှိ အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းများ * အလုံ ၊ ကြည့်မြင်တိုင် ၊ စမ်းချောင်း ၊ တာမွေ ၊ အင်းစိန် ၊ တောင်ဥက္ကလာ မြို့နယ်များရှိ ကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်းများ ဖြစ်သည်။* အဆောက်အဦး ရေရှည် ခိုင်ခံ့မှုအတွက် Quality အပြည့်အ၀ဖြင့်...
Rise Rama9သည်135 Rama IX Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand တွင် တည်ရှိပြီး All Inspire Company မှ တည်ဆောက်ဆဲ Project တစ်ခုဖြစ်သည်။ Building Types Project Type -4Buildings having 8 Floors (Retail3units) Total Units - 655 units Unit Type - 1 Bedroom (25 - 33 sqs.m) -2Bedroom (61 sqs.m) - Duplex (70 sqs.m) Project Highlights• new-gen living style in the designs and functionality• co-working space with hi-speed internet available for 24-hour• coffee shop for residents to relax with some beverages• Residential units here are...
Project Information Location - Soi Pridi Phanomyong 14 Yaek 10, Sukhumvit 71 Road, Phra Khanong Nuae, Watrhana BangkokDeveloper - All Inspire Development Public Company LimitedProject Type -3Buildings 8 storiesProject Units - 672 units (2 shop units)Unit Type - 1 Bed : Type 28, 30, 41.5 Sq.m / 1 Bed Plus : Type 34, 37.5, 38 Sq.mParking - About 40 % (including overlapping cars) Facilities• Swimming Pool• Co-Working Space• Fitness• Relaxing Area• Shuttle Van Service• Garden• CCTV• Elevators Project Highlights BTS Phra khanong Only 1.1 kilometer to BTS but they arrange shuttle bus daily Only 15 min /5station to...
Aspire Erawan Condo
Project developer - AP( Thailand) Project Location - 62 Sukhumvit Rd, Tambon Pak Nam, Mueang Samut Prakan Distric Samut Prakan 10270, Thailand Project Type - Single building having 31 floors (Ready to move in project) Total Units - 1,576 Residential Units + 1 Retails Unit Units Type -Studio 25.5 Sq.M -1 Bedroom 29.5-30.0 Sq.M -1 Bedroom Plus 35 Sq.M -2 Bedroom 47 Sq.M Facilities Swimming Pool Fitness Stream Room on 5thFloor Garden Area at 1stand 31stFloor CCTV 24-hours Security Elevator Parking Gym Wi-Fi Garden and BBQ Restaurant on premise Transportation • BTS Chang Erawan• 650 m /2min by car • BTS Royal Thai...
Thar Yar Kone Residence
Thar Yar Kone Residence ကို အင်းစိန်မြို့နယ် အမှတ် ၅၉ ၊ သာယာကုန်းလမ်း ၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက် တွင် San Taw Mhi Construction မှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ - ၁၀၀% ဆောက်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။- 1350 sqft မှ 1600 sqft အထိ ကျယ်ဝန်းသည်။- မာစတာအိပ်ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၊ မီးဖိုခန်း စသည်ဖြင့် အခန်းဖွဲ့ပြီးဖြစ်သည်။-...